Madaxtooyada oo ku dhawaqday xilliga uu furmayo Shirka Madaxweyne Farmaajo & 5-ta maamul Goboleed - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Madaxtooyada oo ku dhawaqday xilliga uu furmayo Shirka Madaxweyne Farmaajo & 5-ta maamul Goboleed - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war kasoo saartay xilliga uu furmayo Shirka Muqdisho ee Wadatashiga Doorasooyinka Soomaaliya ee dib u dhaca ku yimid.
Shirkan oo ayka qeyb galayaan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Shanta Madaxweyne ee Maamul Goboleed ayaa war kasoo baxay Madaxtooyada Soomaaliya lagu sheegay inuu furmi doono maalinta Khamiista oo taariikhdu tahay 10-ka bisha September.
Shirkan ayaa noqon doona mid ay u dhan yihiin Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada Iyo Gobolka Banaadir, wuxuuna dhammeystir u noqon doonaa Heshiiskii Doorashooyinka dalka 2020/2021, sida u sheegay Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya .
Shir ay hore u shaacisay madaxtooyada oo lagu waday inuu dhex maro Madaxweyne Farmaaao, iyo madaxweynayaahsa Puntland iyo Jubbaland ayaa socon waayey, markii ay ku adkeysteen labada madaxweyne in lagu soo daro saddex madaxweyne ee ka maqan.
Previous articleXOG: Muxuu Madaxweyne Farmaajo uga joojiyey maamul Goboleedyada Lacagtii kabka ee Bankiga Adduunka?
Next articleMareykanku oo taageeray isbedel lagu sameeyo Hay’adaha Amniga..? (Akhriso Fariin ka timid Safaaradda)